Uma ngokungazelelwe uthola ukuthi ingadi yakho ubonakele Silakho ku utamatisi ke noma kunjalo, musa ukuvumela izinto ukuzulazula. Silakho - isinambuzane ukuthi asithinti nje kuphela utamatisi. "Ngaphansi isandla ashisayo" angawa nezinye imifino kanye amakhambi izimbali.
Whiteflies - lilincane, hhayi ningi than 3 mm ubude, izimpukane kokuba enezinto camera enamathela esenzeka kanye nje kuphela. Bona bahlala isitshalo obuningi. ekuqongeleleni enkulu, ngokuvamile ohlangothini engezansi ishidi. Umonakalo main okubangelwa Silakho ku utamatisi - sezinyawo, okuyinto uyahamba iqabunga, ngokuvamile on engxenyeni engenhla. Babeqale ibukeke shining enamathela. Kamuva emkhakheni ehlanganiswa yile-plaque, kwakheka amakhowe tern, ezithinta ngowokuqala omhlophe bese abamnyama.
Ukulwisana Silakho ku utamatisi iqala nokuvinjelwa ivela khona. Ngenxa yalesi simila, okuyinto okusongelayo umonakalo Silakho, ehlezi izindawo kahle umoya kanye lokushisa eliphansi, degrees 14-15 ngangokunokwenzeka. Ngenxa imbangela eyinhloko isinambuzane - eduze kakhulu esilinganayo izitshalo ezindaweni nengenawo umoya ohlanzekile owanele kanye lokushisa eliphezulu kanye nomswakama.
Uma kutshalwa isivele peopled Silakho, zokulawula kumelwe athathe uhlamvu eziphikelelayo. Okokuqala, uma izitshalo abahlala izintwala omdala, kufanele ibekwe eduze izicupho okuqinile. Izimo zethu zihluke kakhulu efanelekayo ayatholakala emakhemisi ngethephu enamathelayo eyenzelwe izimpukane. Kungenzeka ukwenza ezingibeni ezinjalo ngokwabo. Ngenxa yale njongo, ucezu amakhadibhodi noma omunye umsebenzi elikhanyayo umbala udayi, isib, ophuzi noma amhlophe (ukuze izinambuzane ukuba lolo) nangemva ebusweni ocolisekileyo uwoyela amafutha noma Vaseline. Izinambuzane, ehlezi endaweni enjalo ngeke banamathele.
Isiwombe sesibili, lapho zinyamalale Silakho ku utamatisi - sishaye izitshalo nokusetshenziswa kwamakhemikhali ahlukahlukene. Ngokwe-iseluleko balimi abanolwazi, ngempumelelo abantu ikhambi lokulwisana Silakho - emakhemisi ukwelapha utwayi. Thenga Yiqiniso, akudingeki ngamafutha, emulsion, okuyinto emva dilution ngamanzi esikhungweni isilinganiso of 30-50 amagremu litre amanzi izindawo ngayinye kuyoba indlela yokwakheka izitshalo spray abathintekayo. Ungakhohlwa hashaza ngamanzi izinambuzane futhi qwembe ukuthi ihlanganisa amaqabunga, futhi kuphela bese uqhubekela phambili ukwelashwa. Futha izitshalo njalo ngemva kwezinsuku ezimbalwa ukuze nje Silakho ku utamatisi ngeke zinyamalale ngokuphelele.
Enye Folk remedy - tincture garlic. Ukuze ekuwulungiseleleni uthele mayelana 150 amagremu ilitha garlic yamanzi, uvale lid kwengoma izitsha bese ushiye izinsuku 5. Emva kwalesi sikhathi kubuya imoto usulungile. Alulaze mayelana 6 amagremu ukumnika ne ilitha izitshalo amanzi spray nge imvamisa efanayo futhi ngendlela efanayo njengoba kwaba njalo endabeni yokuqala.
Uma amakhambi abantu ukuthi abasakwazi elithambile, kungasizi, musa qinisa ngokugcwele ukwelapha futhi uqale ukwelashwa nge zinambuzane. Lapho ekhetha umkhiqizo ukufunda ngokucophelela yokusetshenziswa - akubona bonke abangabohlobo ephephile bonke hlobo of mila. Cabanga indawo izitshalo zakho: amanye amathuluzi anconywe ukusetshenziswa endlini futhi abanye ngaphandle. Yokusetshenziswa izidakamizwa ezahlukene lihlukile: ezinye kuyosebenza wesikhathi esisodwa, kuyilapho ezinye zidinga inkambo ukwelashwa.
Okusanhlamvu ibhungane: incazelo kanye inkathazo ukulawula
Shtil Georgiy Antonovich: Biography, Filmography